Akhriso :- War Cusub Oo Ka Soo Baxay Guddida Heer qaran ee Covid19 |
Akhriso :- War Cusub Oo Ka Soo Baxay Guddida Heer qaran ee Covid19
Guddida heer qaran ee Covid 19 oo goor dhawayd shir jaraaid qabtay ayaa ka hadlay qodobo badan oo muhiim ah .
Gudida heer qaran waxay Ciidamada Booliska iyo Maamulada Dawladdaha hoose ee Dalka ku amartay in tallaabo laga qaado mulkiilayaasha garoomada Kubada Cagta ee gaarka loo leeyahay iyo Meheradaha Ganacsi ee wali furan kuwaasi oo aan u hoggaansamin Awaamiirta Gudiada islamarkaana sharciga la horkeeno.
Guddidu waxay go’aamisay hawl kala dirista hawl wadeeno wacyigelineed oo ka kooban 186 –qof iyo 62-Gaadhi oo u kala baxaaya Gobolada iyo Degmooyinka Dalka oo ka kooban kuwaasi oo samayn doona wacyi gelin buuxda.
Guddigu waxay sheegtay in Masuuliyiinta kala ah Afhayeenka Madaxtooyada iyo Maayirka Gabiley oo dhawaan ka yimi Dalka Ingiriiska la mariyey nidaamkii Karintiinka ahaa ee 14-cisho ahaa markii ay dhamaysteena ay is baadheen haddana Xaaladadooda caafimaad ay tahay mid caadiya.
Guddida heer qaran waxay shacabka la wadaagaysaa inay saddexda maal mood ee socda waddanka la keenayo Mishiinka Baadhista Xanuunka Covid19 (Laabb) sidoo kalena hawladeenadiisa lagu soo tababaray waddanka Kenya.